Guillermo Galván: "Icho chisungo chemunyori wega wega kutsvaga izwi rake" | Zvazvino Zvinyorwa
Guillermo Galván: "Icho chisungo chemunyori wega wega kutsvaga izwi rake"
Mifananidzo. Guillermo Galván Twitter purogiramu.
Guillermo Galvan Iye munyori uye mutori venhau. Akazvarwa muValencia, uye ave pamudyandigere kubva kunhau, akashanda kwemakore mazhinji muCadena SER, akazvipira zvakazara kuzvinyorwa kubvira 2005. Ndidaidzei Judhasi kana Iko kutarisa kwaSaturn, pakati pevamwe, uye mu2019 iyo saga nyeredzi muongorori Carlos lombardi game Kucheka nguva ndokubuda muchirimo Mhandara yeMabhonzo.
Ndinoonga chaizvo mutsa wako uye kurapwa, kuwedzera kunguva yake yeiyi bvunzurudzo kwaanotiudza zvishoma nezve zvese. Kubva kwavo kutanga kuverenga, vanyori uye mavara favourite kunyangwe unoiona sei iyo pzvemagariro uye edhiyo anorama kutenderedza.
KUKURUKURA NE GUILLERMO GALVÁN
GUILLERMO GALVÁN: Kuverenga kwangu kwekutanga, ngatitii zvakakomba, kwaive Glasgow kuCharleston, imwe yemanovel madiki e Verne, iyo yakabudiswa muchiSpanish ine musoro we Kumanikidzwa kwe blockade. Ini ndichiri kuchengeta iyo kopi segoridhe pamucheka, nekuti Ndakahwina mumakwikwi pazera remakore masere; Ndarasikirwa nevamwe, asi izvo, nerombo rakanaka, ndinochengeta. Chii munyori, nhanho dzangu dzekutanga dzaive enyambo, nyaya dzevana umo airidza chinzvimbo chemunyori uye munyori wekatuni.
Mundima yekurondedzera, kunyora maitiro Ini ndakakanganwa pandakawana mukana wekuvabvisa, nekuti yangu yedzidzo dzidzo mune yekunyora ficha yaive yakanyanya kushungurudza kupfuura yekutamba. Ini ndaifanira kusvika ku kuyaruka kufambira mberi kuwana mufaro muchokwadi verenga uye nyora, uye panguva iyoyo ndakawana iyo dramaturgy, nemabasa - zvakasikwa asina kukwana - ayo nhasi anogona kutsanangurwa, nerupo rukuru, se variko variko kana vasina musoro. Iko hakuna kwekusara kwavo.
GG: Chinonyanya kukosha muhupenyu hwako ndiyo yaunogamuchira mukati zera diki. Zvirinani, ndozvazvaive zviri kwandiri, uye mupfungwa iyoyo handigone kuzviisa pabasa rimwe chete. Ini ndaifanira kudoma akati wandei e Hesse, Kafka, Baroja, Unamuno kana Dostoevsky. Nekuva mumwe wekutanga, pamwe Steppe mhumhi Hesse. Sei? Chokwadi nekuti panguva iyoyo Ini ndakazvifananidza nemunhu aishamisika pamberi penyika, uye nekuti nzira yekuzviudza yakandinyengera.
AL: Munyori waunofarira kana mumwe akanyanya kukanganisa basa rako? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
GG: Ndinoyemura vanyori vazhinji, kunyangwe ndichiedza kusandifurira. Ini ndinotenda kuti ibasa remunyori wega wega kutsvaga izwi ravo, uye zvinokonzeresa - kuziva kana kwete - zvinoda kuzviisa. Izvo zvakati, uye kusiya zvekare zvekare mupombi. Galdós, Baroja, Marsé, Grandes, Landero, Padura, Dostoevski, Auster, McEwan, Coe...
AL: Ndeupi hunhu mubhuku raungadai uchida kusangana nekugadzira?
GG: Iyo mhinduro zvinogona kuva ambivalent. Kuziva kunoreva kupinda muchikamu chebhuku seimwezve hunhu, yechipiri uye yakangwara, kumisidzana nehunhu hukuru. Mutambo unonakidza uye unonyanya kunyora pachawo. Kuzviona seizvi, Ndinoda kutaura naRaskolnikov, protagonist we Mhosva uye Kurangwa. Uye isa ku denga, ngatiendererei mberi nenhema: Don Quixote.
GG: Runyararo, kure sezvinobvira. Semuverengi Ini ndine hunyanzvi hwekubvisa uye ndinogona kuzviita nerumwe ruzha kumashure. Zvimwe maniac, kana uchigona kuchidana kudaro, ndiri nekunyora. Kutanga, ini ndoda zvirinani maawa mashoma pamberi pasina zvinokanganisa, kana ndikanyatsobatanidzwa mukunyora kana kunyudzwa mune zvinyorwa. Para nyora zvinyorwa chero nguva uye mamiriro ezvinhu akanaka, uye dzimwe nguva iwo manotsi anokurumidza kusarudza sezvandakatonyora mumaawa angu akanyarara.
GG: Mune "mousetrap" yangu, inova nzira yandinodana iyo kamuri kwandinonyora, ndinonzwa kugadzikana, kunyangwe ndichigona kuzviita chero kunosangana nemamiriro ari pamusoro. Mutsika Ndave zizi rehusiku, uye mumaawa ekupedzisira ehusiku mazhinji emanoveli angu akaberekwa. Nezera, uye kunyanya nekurega kwangu basa semutori wenhau, Ndatora kufarira mangwanani. Saka tinogona kutaura izvozvo chero nguva yakanaka kushanda kana uine kuda kuita saizvozvo.
GG: Ini ndinoda zvinyorwa zvakanaka, zvisinei nemhando. Mukati meaya, noir uye nhoroondo yenhoroondo, kunyange ini ndisingazvidzi izvo zvakanaka fungidziro kana sainzi ngano. Sezvo zvine hungwaru zvemapepa, ini zvakare ndakaverenga Ensayo, kunyanya nhoroondo-yekudzidza.
GG: Ndangopedza Ndangariro dzehupenyula nhoroondo yeupenyu hwaJuan Eduardo Zúñiga, kunyangwe yangu yekumashure kuverenga kubva muhusungwa iri iyo Zvikamu National weGaldós; Ini ndanga ndaverenga akati wandei, anonyanya kuzivikanwa, asi kuaverenga zvakateerana kubva pakutanga kusvika kumagumo kunopa kuwirirana kwenhoroondo uye idambudziko riri kuratidza mufaro. Kana zviri zvekunyora, ini ndatoenda kumberi chikamu chechina kubva saga ye Carlos lombardi, iyo ini ndinotarisira kupedzisa pakupera kwegore kana kutanga kwegore rinouya.
GG: Zvakaoma, kana iwe ukaedza ne tsika yechinyakare, zvese nenhamba yevanyori uye nemamiriro ezvinhu kana zvido zvebato rekutsikisa. Zvisinei, nguva imwe neimwe yavanopiwa mamwe desktop kutsikisa mikana kuburikidza nemamwe mapuratifomu, mapuratifomu ayo, zvinoshamisika, anokwikwidzana nemukana mukuru nezvitoro zvemabhuku kusvika pakuisa pangozi kurarama kwavo.
Tinorarama nguva dzekuchinja kwakadzama mundima iyoyo, uye mashura anoenderana nekuti ndiani waunobvunza. Chichava shanduko positive kana huwandu hwevaverengi huchiwedzera izvo, muchidimbu, ndevaya vanobata zvimiti zvemumvuri. Uye ndiri kutaura nezvevaverengi vechirume nekuti varavi vechikadzi, nerombo rakanaka, vanoita kunge vachakura zuva nezuva.
AL: Inguva yedambudziko ratiri kusangana nayo iri kukuomera here kana iwe uchave unokwanisa kuchengeta chimwe chinhu chakanakira iwe pachako uye nemanyorero emangwana?
GG: Kunze kwevamwe, vari kuuraya nedenda, dambudziko rehukuru uku harimbofi rakanaka. Kubva pane yangu maonero, nerombo rakanaka, ini handina kumbofanirwa kutambura kurasikirwa, asi nehunyanzvi zvakakanganisa nhoroondo yangu Mhandara yeMabhonzo, yechipiri yeLombardi saga, iyo ndakanga ndangoenda apo iyo mamiriro ekutya. Kudzikira mukusimudzira kwayo izvozvi, nekukwana uye kutanga, isu tiri kuyedza kukunda. Zvinenge zvisiri izvo kana ndikazvitora sekukanganisa ramangwana, nekuti tsaona imwechete iyi yakatambura mamwe mabasa mazhinji, vanyori nevanyori.
Uye zvavo zvinyorwa vakamanikidzwa ku kunonoka zvirongwa zvako mune imwechete trimester; vamwe, vane mwero kwazvo, vanga vari maronda anouraya. Izvo hazvireve kutaura zvimwe zvakawanda zvemagariro zvikamu. Saka ikozvino hapana chakanaka Ndiri kuona mune rino gore 2020. Zvichida, nekuti ini handisi Boccaccio kana Camus.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Guillermo Galván: "Icho chisungo chemunyori wega wega kutsvaga izwi rake"